विमानस्थलमा बुवा अनिल कपुरलाई देख्नेवित्तिकै अंगालेर किन रोइन् सोनम कपुर ?::The Leader Of Nepal
विमानस्थलमा बुवा अनिल कपुरलाई देख्नेवित्तिकै अंगालेर किन रोइन् सोनम कपुर ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर आफ्ना बुबा र दिदी रिया कपूरसँग धेरै नजिक छिन्। सोनम प्रा िसोशल मीडियामा आफ्ना बुबा अनिल कपूरसँग बाल्यावस्थाको सम्झनाहरू सार्वजनिक गर्छिन । सोनम कपूर र अनिल कपूर बलिउडमा सर्वश्रेष्ठ बुबा र छोरीको जोडीका रुपमा मानिन्छन्। तिनीहरूको जोडी सोशल मीडियामा पनि देख्न सकिन्छ। सोनम कपूर धेरै समयदेखि आफ्ना बुबा अनिल कपूर र परिवारबाट टाढा थिइन ।
टाढा हुँदा उनले बुवा र परिवारलाई सम्झेर आफ्नो भावना पनि सार्वजनिक गर्थिन । हालै, जब सोनमले धेरै समय पछि बाबुलाई देखीन्, उनी यति भावनात्मक भइन् कि उनको आँखाबाट आँसु झर्यो।
महामारीका कारण, सावधानीका रूपमा भारतमा मात्र होइन विश्वभर निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। यद्यपि लकडाउन धेरै ठाउँमा हटाइएकोछ । देश र विदेशको धेरै उडानहरू पनि प्रतिबन्ध थिए । महामारीको कारण, सोनम कपूर पनि लगभग एक बर्षदेखि आफ्ना पति आनंद आहुजासँग लन्डनमा बसिन् । सोनम कपूर हिजो राती मुम्बई फर्कीएकी छन्। उनले आफ्नो बुवा अनिल कपुरलाई धेरै लामो समय पछि भेटिन् । उनले बुवालाई देखेर आँशु रोक्न सकिनन् ।
अनिल कपूर एयरपोर्टमा आफ्नो छोरी सोनम कपूरलाई लिन पुगेका थिए। सोनम कपूर एयरपोर्ट टर्मिनलबाट बाहिर आउने बित्तिकै उनका बुबा अनिल कपूर उनको अगाडि उभिरहेका थिए। बुबालाई देखेर सोनम कपूरको मुखबाट केवल एउटा शब्द आएको थियो जुन पापा थियो।
आफ्नो बुबालाई देखेर सोनम कपूर एकदम भावुक भइन्। अनिल कपूरलाई देखेपछि, छोरी सोनम कपूरले उसलाई अँगालिन् र उनी रोइन्, तर मिडियाको अगाडि, सोनमले आँसु लुकाईरहेकी थिइन्। अनिल कपूरले पनि आफ्नी छोरीको पुछे र मायापूर्वक उनलाई अंगाले। यद्यपि केही समय पछि सोनमले आफुलाई सम्हालिन् ।